ချိတ်ဆက်ထားသော USB ကိရိယာမှဗိုင်းရပ်စ်များကိုအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရန် Script Linux မှ
ချိတ်ဆက်ထားသော USB ကိရိယာများမှဗိုင်းရပ်စ်များကိုအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရန် Script
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | ပရိုဂရမ်းမင်း, အကြံပြုပါသည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာငါအကြောင်းကိုတင်ခဲ့သည် reggeatónကို USB devices များမှအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးသော script တစ်ခုဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ခုအားထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့် USB devices များမှဂီတအမျိုးအစားအချို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်မှန်ကန်သည်၊
ယခင်ဇာတ်ညွှန်း၏ post သည်၎င်းသည် reggeaton ဖြစ်ခြင်းအတွက်ဂီတကိုကျင့် ၀ တ်ပြုခြင်း (သို့) ခွဲခြားခြင်းမပြုသင့်သည်မှာများသောအားဖြင့်မနှစ်သက်သော်လည်း၎င်းသည်ဤပြissueနာသည် post ကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ နည်းနည်းမေ့သွားတယ် (လုံးဝလုံးလုံးလျားလျား LOL!) script နှင့်၎င်း၏ code ၏လိုင်းများ။
စကားမစပ်, script ကိုကဲ့သို့သော ငါreggeatónကိုဖျက်ပစ်ရုံသာမဟုတ်ပါဘူး, ဇာတ်ညွှန်း အဆိုပါ filter ကိုကိုက်ညီသမျှရှင်းလင်းလိမ့်မည်အကယ်၍ သင်သည်ငါ့ကို .exe သို့မဟုတ် (ဥပမာ) crack သို့မဟုတ် messi နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အားဖယ်ရှားလိုပါက၎င်းကိုစစ်ထုတ်ခြင်းတွင်ထည့်ရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။
ဖိုင်များအလိုအလျောက်ဖျက်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင် script တစ်ခုရှိရန် autorun.inf USB ကိချိတ်ဆက်သောအခါ Windows တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
Script ကူးယူပါ Script ကိုကြည့်ပါ
2. သငျသညျကောင်းစွာလုပ်နေတာ, execute ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ ၎င်းကို right-click + Permissions tab + က executable ဆိုတာကိုညွှန်ပြသည်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် terminal ကိုသုံးပါ။
3. ဟုခေါ်သည့်ဖိုင်ဖန်တီးပါ ဇော် ယခင် script ရှိသည့် folder တစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိပြီး filter.lst ၏ပါဝင်မှုသည် -
4. အဆင်သင့်။ ထပ်ထည့်စရာမလိုတော့ပါ။ /etc/rc.local သို့ထည့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏ရွေးချယ်မှုများကို သုံး၍ ဖြစ်စေ script ကို startup applications များထဲသို့ထည့်သင့်သည်။
၎င်းသည် antireggeaton.sh script ကိုယခင်ပို့စ်မှအတိအကျအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးအငြင်းပွားဖွယ်ရာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်
သငျသညျမွငျသကဲ့သို့, script ကိုသူ့ဟာသူအန္တရာယ်မပေး, script ကို ၎င်းသည် filter.lst တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုသာဖျက်ပစ်လိမ့်မည်, သူတို့ကသင့်အားReggeatón, autorun.inf, .exe ဖိုင်များ၊ စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာဖိုင်တွဲများစသည်တို့ကိုဖျက်ပစ်ရန်သင့်အားပြောနိုင်သည်။ they
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် add ထည့်သွင်းဖို့အများကြီးပိုမရှိပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ပရိုဂရမ်းမင်း » ချိတ်ဆက်ထားသော USB ကိရိယာများမှဗိုင်းရပ်စ်များကိုအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရန် Script
အဘယ်ကြောင့်နှောင့်အယှက်ကွင်းဆက်အစား crontab မသုံးပါသနည်း
၁။ manual cycle သည်စက္ကန့် ၅ စက္ကန့်၊ ၂၀ စက္ကန့်စသည်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် crontab ခွင့်ပြုသည့်အနည်းဆုံးအချိန် (၁ မိနစ်) ထက်တိုသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ crontab မှာရေးဖို့၊ root အခွင့်အရေးတွေမလိုအပ်ဘူးလား။ ။ ငါ crontab ဖြင့်ရေးသားခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများလိုအပ်သည်ဟုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါကအသုံးပြုသူအချို့သည် script ကိုအသုံးပြုရန်အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးများလိုအပ်ခြင်းအတွက်တိုင်တန်းလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်သည်။
"man crontab" မှ
Crontab သည် cron (8) daemon အတွက်အသုံးပြုသောဇယားများကိုတပ်ဆင်ရန်၊ ဖယ်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်စာရင်းပြုစုရန်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင် crontab ရှိသည်။
"Crontab -e" သည်အသုံးပြုသူ cron ကိုတည်းဖြတ်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ crontab -e ကိုသုံးခဲသည်။ ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်သည်။
Autorun.inf ဖိုင်ကိုဖန်တီးပါ။ အဲဒီမှာတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီးရင်ဖတ်ဖို့သာပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး
ကောင်းသော post ကောင်း!
အချို့ Autorun များသည်ခရီးဆောင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်
Autorun ကိုဖျက်ခြင်းနှင့်ဂရုပြုပါ။ Claro နှင့် Personal 3g modem များကအနိုင်ရရှိလျှင်ဆက်သွယ်မှုကိုစီမံရန်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ pen drives များတွင် xp ကိုသုံးသောအခါ autorun.inf ဟုခေါ်သောဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဝှက်ခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များ (နှင့်ဤ script) သည်ဖိုင်တွဲမဟုတ်ဘဲထိုအမည်ဖြင့်ဖိုင်ကိုဖျက်ရန်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်သောကြောင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘယ်သောအခါမျှဖျက်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်များအတွင်းနေရာချခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
ဤဆာဗာတွင် /antireggeaton.sh ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
ငါဖိုင်ကို download လုပ်လို့မရဘူး!
sudo သို့မဟုတ် superuser (သို့မဟုတ် root) အနေဖြင့်ဆိုင်းအင် ဝင်၍ ထပ်ကြိုးစားပါ။
အသင့်ဖြစ်ပြီလား, အမှားအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး ved
သူတို့နောက်ဆုံးတော့ငါ့စကားကိုသည်အထိ။ ၄ င်းသည်အချိန်အကြောင်းဖြစ်သော်လည်းစာဖတ်ခြင်း၏ autoruns function ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထို autoruns များသည်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောဤဗိုင်းရပ်စ်များကို execute လုပ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့လိမ့်မည်။
ပြီးတော့ autorun မကောင်းတဲ့ဟာတခြားသူနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားတာလဲ။ 🙂
executable အားဖြင့်၎င်းကိုဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Autorun သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော executable ကိုဖွင့်ရန် programme ဖြစ်ပါက USB modem အတွက် driver installer ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ မမြင်ရသောဖိုလ်ဒါတွင်ကွယ်ဝှက်ထားသော (သို့မဟုတ် DLL ပါ ၀ င်သည့်) ထူးဆန်းသောတိုးချဲ့မှုတစ်ခုပါသည့်ဖိုင်တွဲပါသည့် executable တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နိုင်သည်။
Apache ဆာဗာ http://ftp.desdelinux.net ဆိပ်ကမ်း 80
ဝိုး !! ငါ ipimtzag.rimed.cu မှလာသည် !! ဟားဟား !!
စကားမစပ်, ဒီရက် Rimed ကော? 😀
hehehe, အreggetónအရာကြံဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအားလုံးကို pen drives တွေတောင်းပြီးကွန်ပျူတာကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။
သေချာသည်က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကူညီလိမ့်မည်။ 😀
ကောင်းတယ် ကျွန်တော် script ကိုဘယ်လို run သလဲ။ ဒါ့အပြင်တစ်စုံတစ် ဦး က terminal မှ startup သို့ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာရှင်းပြထားတယ်။ ငါဂရပ်ဖစ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်လို console ကနေငါသိရန်လိုသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်မသိလိုက်ပါက Linux တွင်ဖတ်ရန်တစ်ခုတည်း၊ system နှင့် ၀ င်းဒိုးဖိုင်များအတွင်း၌ ၀ ှက်ထားသော attribute များကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ခွင့်ပြုသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။
chattr command ကိုကြည့်ပါ။
Reggashitón, cumbia shit နှင့်အခြားအရာများကိုဖျက်ခြင်းသည်ကျင့် ၀ တ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုသာမက၎င်းသည်ကျန်တဲ့ "စဉ်းစားတွေးခေါ်သော" လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အတွက်တာဝန်ဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေ bro ။
ငါ Python မှာလည်းအလားတူဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။ နည်းနည်းပိုအခြေခံကျသော်လည်းအကျိုးရှိသည်။ ၎င်းကို မျှဝေ၍ ဤနေရာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်၎င်းကိုအဘယ်မှာ upload လုပ်နိုင်သနည်း။
ဒယ်နီလာ pedrozo ဟုသူကပြောသည်
daniela pedrozo အားပြန်ပြောပါ
Daianis Charriz ဟုသူကပြောသည်
daianis charriz သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသူပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ script ပြုလုပ်ရန်ကူညီနိူင်သည်။ grub ကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပါသောပိုက်ကွန်များအတွက်ကျွန်ုပ် Linux တွင်စတင်ပါက၎င်းကိုစတင်လိုသည်ကိုပြုပြင်ချင်ပါသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများစုကအနိုင်ရတယ်၊ ငါပိုက်ဆံ ၂၀၀ လောက်လုပ်ချင်တယ်။
usb မှ script ရေးရန်နှင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အောက်တွင်မျဉ်းကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်ထည့်သည်
၁- terminal ကိုငါတို့ဖွင့်သည်။
2- ကျွန်ုပ်တို့သည် root user ကိုသုံးသည်။ Pixart တွင် "su root"၊ Ubuntu « sudo -s »တွင်ရိုက်သည်။
စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ။ (သင်စကားဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်သောအခါ
ပုံ) ကျောင်းသား .d
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်ရန်သွားသောဖိုင်ဖြစ်သော "grub.cfg" ၏မိတ္တူပွားတစ်ခုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာနယ်ဇင်းကိုနှိပ်ပါ« cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub_original.cfg »ဟုရိုက်သည်
key ကိုရိုက်ထည့်ပါ (အားလုံးကောင်းမွန်စွာမကျေနပ်လျှင် cfg နှင့် / boot ကြားရှိနေရာကိုမှတ်သားပါ)
ယခုတွင် configuration file ကိုဖွင့်တော့မည်။ gedit
/boot/grub/grub.cfg »ကိုရိုက်ပြီး Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (gedit နဲ့ကြားကနေရာကိုမှတ်သားပါ
/ boot) ။ Gedit (စာသားတည်းဖြတ်သူ) ပွင့်လာလိမ့်မည်။
၅။ "set default =" 5″ "ကိုရှာသည်။ ကောင်းပြီ, သင်အကြားအဘယ်အရာကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ကိုးကားပါတယ်။ grub အတွက် default အနေနဲ့ option ကို! အထက်ပါဥပမာကိုလိုက်နာပါ။
ကျနော်တို့ "set ကို default ="4put "ထားသင့်ပါတယ်။
၆။ GRUB ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောအချိန်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်တော့မည်။
"set timeout = 10" ကိုရှာပြီး၎င်းကို "set timeout = 30" သို့ပြောင်းပါ။
၇။ File-> Save, File-> Exit နှင့် system ကိုတိုက်ရိုက် restart လုပ်ပါ
terminal ကို« reboot »နှင့်စာနယ်ဇင်း,
ငါ့ကို ".lnk" အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် "* .lnk" ကို filter တစ်ခုအနေဖြင့်သာအသုံးပြုရန်လိုသလား။
ကြော်ငြာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် (မည်သည့်ဝဘ် browser တွင်)